Apple Inoburitsa WatchOS 7.6.1 Kuvandudza Kwekuchengetedza | IPhone nhau
Apple inoburitsa watchOS 7.6.1 yekuchengetedza yekuvandudza
Kambani yeCupertino ichangobva kuburitsa inogadziridza vashandisi veApple Watch, mune iyi kesi ndiyo watchOS vhezheni 7.6.1 mairi kumwe kugadzikana kwekugadzirisa kunogadziriswa uye mamwe matambudziko ekuchengetedza anoita kunge ane vhezheni yapfuura akagadziriswa. Kubva kuApple zvinokurudzirwa kuisa iyi vhezheni itsva nekukurumidza pazvinhu zvese zvinoenderana.
Mune ino kesi shanduro dzakapfuura dzakaburitswa munguva pfupi yapfuura, zvinoreva kuti mu Cupertino waona dambudziko hombe rekuchengetedza kana kukanganisa uye yakaburitsa iyi vhezheni itsva kuti isu tigoisa yedu Apple Watch.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti idzi shanduro dzakaburitswa zvakangoerekana zvisingawanzo kuwedzera shanduko mukushanda kwewachi pachayo kana muchirongwa chinopfuura kushandiswa kwe kugadzirisa matambudziko kana mabhugi akawanikwa mushanduro yapfuura. Iyi vhezheni itsva yewatchOS 7.6.1 inoita kunge kesi yeshanduro yekutambudza chete uye yakaburitswa maminetsi mashoma apfuura.
Kuisa iyo nyowani vhezheni, ita shuwa kuti iyo Apple Watch yakabatana nejaja uye mune yakatarwa iyo iPhone yakabatana kune yeWi-Fi network. Kana tangove nezvose izvi tinokwanisa kuita iyo yekuvandudza pasina dambudziko kana tisina iyo yakagadzirirwa otomatiki kana kuti isu kuti titore nekuisa iyo vhezheni husiku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa watchOS 7.6.1 yekuchengetedza yekuvandudza
Nekuti kuMexico handizive nezve Kusunungurwa, Chero ani Anoziva.